Haunted Dorm Apk maimaim-poana ho an'ny Android[Mod-Menu]
Febroary 23, 2022 by John Smith
Haunted Dorm dia lalao paikady malaza ho an'ny Android. Ny dikan-teny ofisialy dia amin'izao fotoana izao amin'ny fomba fitsapana manerantany. Ny olona dia voasarika amin'ny lalao ary te hanandrana izany. Androany dia hanolotra ny kinova novaina amin'ny lalao izahay. Ny mpilalao dia hahazo Mod Menu amin'ny lalao.
Ny lalao ofisialy dia sarotra ny miaina. Ny paikady no fanalahidy fa ity dikan-teny novaina ity dia hitondra endri-javatra tena mahafinaritra ho an'ny mpilalao. Ny lohahevitra dia hitoetra ho iray ary tsy hisy fiovana amin'ny lalao. Ny mpilalao dia saika hahazo fanampiana fanampiny mba ho velona.
Inona no atao hoe Haunted Dorm Apk?
Haunted Dorm Android dia lalao paikady ho an'ny mpilalao Android. Amin'izao fotoana izao ny sokajy lehibe dia Strategy fa ny lalao tahaka ireny dia antsoina hoe Lalao Defense Tower. Tena mahafinaritra tokoa ny lalao fa ny dikan-teny novaina dia hitondra fientanentanana bebe kokoa amin'ity lalao ity.
Ny lalao dia tena mampatahotra, azo isaina ho toy ny lalao mampihoron-koditra ihany koa. Tena ho mora ny manomboka ho an'ny mpilalao. Ny hevitra dia tena tsotra azo. Hiditra ao amin'ny efitrano fatoriana feno efitrano ny mpilalao ary ity efitrano fandraisam-bahiny ity dia hazain'ny matoatoa. Ity dia lalao an-tserasera, ka tsy ho irery ianao ao.
Hisy ekipa ahitana mpilalao enina mifandray kisendrasendra manerana izao tontolo izao. Ny mpilalao rehetra dia tsy maintsy manindry ny bokotra Vonona eo amin'ny dashboard-ny. Rehefa vonona ny mpilalao rehetra dia hiditra ao amin'ny efitrano fatoriana izy ireo. Ny tanjon'ny mpilalao tsirairay dia ny hahazo efitrano banga. Tsy ho sarotra ny fitadiavana efitrano tsy misy na inona na inona eto.
Hisy varavarankely 20 segondra hahitana ny efitrano. Rehefa tapitra ny 20 segondra dia hanomboka hivezivezy manodidina hanafika ny Ghost. Mba hijanonana ho azo antoka dia tsy maintsy manidy ny varavarana ny mpilalao ary matory eo am-pandriana. Ny mpilalao tsirairay dia tsy maintsy mampitombo ny fiarovany mba ho velona izay tsy ho mora.
Raha vao matory eo am-pandriana ny mpilalao dia hanomboka hamokatra vola madinika. Ny vola madinika no fanalahidin'ny fijanonana ho velona eto. Ny vola madinika vokarina dia hampiasaina hividianana fanavaozana ho an'ny varavarana. Ataovy mafy araka izay azo atao ny varavarana. Hisy safidy hanampiana fitaovana bebe kokoa hanafika ny matoatoa.
Rehefa tafavoaka velona amin'ny fanafihana ianao dia hitombo araka izany ny haavon'ny matoatoa. Hihamatanjaka hatrany ny fanafihana. Noho izany dia tsy maintsy mampitombo ny haavon'ny fiarovany ny mpilalao. Ny safidy tsara indrindra dia ny fanavaozana ny fandriana. Ny fandriana nohavaozina dia afaka mamorona vola madinika bebe kokoa sy haingana kokoa.
Ny tanjona dia ny ho velona mandritra ny fotoana maharitra ary ho lasa olona farany velona. Eto dia ho mora ny Mod Menu. izany Lalao Mod dia hanana kisary mitsingevana inbuilt eo amin'ny efijery hanombohana ny sakafo. Hisy safidy maromaro omena ao amin'ny menu ho an'ny mpilalao.
Ireto ny sasany amin'ireo safidy nomena ny mod menu:
Nitombo ny Ghosts HP.
Mitombo hatrany ny vola madinika honey Badger.
Tsy mihena ny vola madinika volamena ampiasaina.
Mitombo hatrany ny fampiasana herinaratra.
Nihatsara ny hafainganam-pandehan'ny fanafihana turret.
Ireo no safidy lehibe omena amin'ity dikan-teny novaina ity. Amin'izao fotoana izao dia hisy safidy maro hafa azo alaina ao amin'ny menio. Ny serivisy rehetra atolotra eto dia ho azo ampiasaina maimaimpoana. Ireto misy lalao mod mitovitovy amin'ireo mpilalao afaka manandrana izany hoe CNAF Apk ary Clash Mini Apk.
anarana Dorm mihantona
Anaran'ny fonosana com.haunteddorm.mihuan
Ilaina ny Android 5.0 ary avo kokoa
Famoronana avy amin'ny antoko fahatelo ity ka tsy hita ao amin'ny Google Apps Store. Azo alaina maimaim-poana eto amin'ny tranokalanay ny fisie fisintahana lalao Haunted Dorm. Ny rohy fampidinana dia azo antoka tanteraka ny fampiasana ary ny hack mihitsy no miasa tsara.
Mba hanombohana ny fizotry ny fampidinana dia mila mandeha any amin'ny bokotra fampidinana misy ao amin'ny lahatsoratra ianao ary tsindrio indray mandeha. Ny fampidinana dia mandeha ho azy aorian'ny paompy tokana nefa tsy maintsy miandry segondra vitsivitsy ianao satria manomana ny rakitrao ny mpizara amin'io fotoana io.
Ho an'ny fametrahana ny rakitra Apk dia tsy maintsy mandeha any amin'ny fikandrana telefaona ianao> fikajiana fiarovana ary avelao ny fametrahana avy amin'ny loharano tsy fantatra. Ankehitriny dia tsy maintsy mandeha any amin'ny mpitantana ny rakitra ianao ary tadiavo ny Apk.
Mila manindry azy fotsiny ianao dia hanomboka ny wizard fametrahana anao. Tsindrio fotsiny ny bokotra fametrahana ary miandry ny dingana ho vita.
Maimaimpoana ny misintona.
Tsy ilaina ny fividianana an-lalao.
Fifanarahana fampidirana eo noho eo.
Bokotra Mod Menu fikandrana mitsingevana.
Fanaraha-maso malefaka sy sary avo lenta.
Mampiasà vola madinika betsaka araka izay tianao.
Amboary ny entanao amin'ny ambaratonga ambony indrindra.
Milalao an-tserasera miaraka amin'ireo mpilalao kisendrasendra.
Miresaka amin'ny lalao.
Mbola maro hafa…
Ity lalao tokana ity dia mitondra paikady sy fonosana lalao mampihoron-koditra. Tsy hisy lalao be loatra toa ny Haunted Dorm lmhmod, ka tsy ho ratsy ny manandrana azy.
Sokajy Strategy, Games Tags Dorm mihantona, Ampidino ny Dorm Haunted Dorm, Lalao Haunted Dorm, Lalao Mod Post Fikarohana
Office Fever Apk ho an'ny Android Free Download